Paris St Germain oo hanatay horyaalka France | WAJAALE NEWS
April 23, 2019 - Written by Reporter:
Kooxda Paris St Germain ayaa ku guuleysatay horyaalka kubadda cagta dalkaasi, kaddib marki ay 3-1 ku garaacday kooxda Monaco ciyaar ka dhacday garoonka PSG ee Parc des Princes ee magaalada Paris.
Waa markeedii sideedaad oo ay PSG noqoneyso horyaalka Faransiiska tan iyo markii la aas aasay kooxdani, waxaana horyaalka sannadkaan ay qaadeysaa iyadoo ay ka hadhsanyihiin shan ciyaarood.
Dabaaldagga Paris ST Germain, wuxuu sii biloowday Axadii ka hor inta aynaba ciyaarin kulan ay la ciyaartay Monaco, dhinaca kale markii kooxda kusoo xigtay ee Lille ay barbarro goolal la’aan ah ku kala baxeen Toylouse. PSG waxay hadda leedahay 84 dhibcood, halka Lille oo kusoo xigta ay leedahay 65.
PSG Sabtida ayay qaadi kartaa koobka waddanka Faransiiska oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan dalkaasi, haddii ay ka badiso ciyaarta finalka ah, kooxda Stade Rennais.
Dhanka kale ciyaartii ay PSG la ciyaartay Monaco waxaa saftay oo dib garoonada ugu soo laabtay xiddigooda reer Brazil, Naymar oo muddo saddex bilood ah dhaawac ku maqnaa.